Ukuqala ukuze uthole online, ezizimele ngokushesha ebhekene nenkinga: kanjani imali Yandex Imali? Lokhu, Uma unganakile, umbuzo kunalokho kuyinkimbinkimbi zingaxazululwa ngezindlela eziningi.
Lamadolobha esimanjemanje kakhulu, uhlelo ezihlongozwayo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule - ukuthola ushevu ikhadi ekhethekile futhi kulula ukuhumusha siqu ezezimali wakhe electronic. Kuyinto efanayo kakhulu MasterCard, kodwa usenayo logo ubuthi. I uqobo khadi Nokho ekhishwe mahhala, ngoba ukulethwa imeyili kukuthatha ruble 99 (lokhu eRussia) noma ruble 199 (i abafokazi). Eminyakeni emithathu wakhonza ikhadi mahhala, kodwa ke isevisi izobiza ruble 30 ngenyanga. Ungakwazi oda ikhadi inthanethi. Nokho, ngoba akumelwe sikhohliseke. Uma le ndlela umsebenzisi akathandi, kungenzeka ukunikeza izinketho eziningi ambalwa ukuze cash ukuhoxiswa.
Ithiphu Omunye njengoba imali Yandex Imali
Indlela elula zokuguqula dolobha e-elekthronikhi ukukhala ezimnandi ephaketheni lami imali uyashesha kakhulu futhi kulula ukuze uthumele imali ekhadini, Alfa-Bank, Bank RosEvroBank noma "Ukutholwa". Isiphetho Yandex imali kuzokwenzeka ezinsukwini ezingengaki ezizayo, nakuba ngezinye izikhathi ukuhumusha kwenziwa, futhi emva kwamaminithi ambalwa, kanye nokulahlekelwa kuyinto 3% kuphela lemali ahoxiswa.
A inzuzo enkulu yalesi samuntu Kuyaphawuleka ukuthi okukhiphayo kungaba finance hhayi kuphela ekhadini lakhe, kodwa ekhadini ajwayelekile noma othile nasezihlotsheni. Ngakho-ke, ngisho nomoya uqobo ngqo leli khadi akudingekile, uma othile kusuka abanye, ojabulela ukuqiniseka ngezokuvakasha, ngoba kakade, ngokwesibonelo, iholo ezinjalo, okuyiwona wona idluliswe.
Yonke inqubo kwenziwa ekhaya, nekhompyutha. Isayithi "Yandex", vele ugcwalise ifomu, okuyinto kufanelana inombolo yekhadi - futhi zonke isiqedile!
Nakuba leli khadi akuqinisekisi ukuphepha ephelele amanani agcinwe kuso. Ezinobungozi ukondla obushade naye emuva kwesehlukaniso abakweleta amabhange kanye nabanye abantu, lapho inkantolo yayalela ukuthi ikhokhwe, kungenzeka ebhekene nenkinga yokuthi imali ngokuqondile ikhadi uzoya isikweletu ukubuyiswa kwemali yesikhwama.
Ukusikisela yesibili njengoba imali Yandex Imali
Le ndlela wukuthi ngezokuvakasha uthola imali yabo isigaba Migom futhi CONTACT izinhlelo. Ngesikhathi Yandex efanayo ukususa 3% ikhomishini, futhi lezi zinhlelo - 1.5% ku-Russia, noma-2% abantu abavela kwamanye amazwe, kodwa ruble hhayi ngaphansi kuka-60.
Ukuze uthole ezandleni zabo siqu ethile, kumelwe futhi ugcwalise ifomu kuwebhusayithi. Kufanele ucacise idatha yabo siqu, iphuzu lapho uya uthole imali, futhi yebo, kakhulu lemali. Uma uthola imali Kuyadingeka ukuba ipasipoti khumbula enanini elihlongozwe isicelo.
I yokuntula le ndlela kukhona nje iphesenti eliphezulu ukulahlekelwa ngenxa outputting kanye neqiniso lokuthi lo msebenzi kungase kuthathe isikhathi eside kunaleso ekhishwa ikhadi - kufika ezinsukwini ezimbili. Ngaphandle Migom uhlelo kusebenza kuphela labo basebenzisi ukuthi atholakala.
Muscovites Ungaphinda usebenzise NSCA "ezimbanjeni" amasevisi imali. Nokho, ukulinda kuyoba isikhathi eside, ukheshi ngeke kudingeke ulinde isikhathi eside ukuze izinsuku ezintathu ukusebenza, futhi ikhomishana kuyoba ulingana 3% kanye ruble angu-15.
Enika yesithathu njengoba imali Yandex Imali
Ungakwazi ngokushesha futhi kalula uthumele imali yabo ngogesi kunoma akhawunti Savings Bank of Russia, okungenani kuye ngokwakhe, yize umngane wakhe. Yiqiniso, ibhange ukonga ngeke sikukhokhise isamba esengeziwe sika-ukudluliswa iphesenti, futhi Yandex, njengoba kule nguqulo odlule - 3% plus ruble 15 ngenhla. Futhi ukulinda kuyinto babe izinsuku ezintathu kuya ngesonto.
Kusekhona umuntu inkinga: ngezinye izikhathi ebhange angamuvimba isicelo sakho noma ngasiphi isizathu. Futhi uma impahla yakho wahlawuliswa isibonelo, endabeni izikweletu ku loan, bese kube kuhle yokuthi imali idluliselwe ngeke bakwazi ukuthola - bona uphelelwa-akhawunti yasebhange, okuyinto wena nakwabangenangqondo.
Ithiphu amane, ozokusiza imali Yandex Imali
Thengisa E dolobha kulokhu kwenziwa ngokusebenzisa ifoni bilaynovsky. Lokho kusho ukuthi kumelwe kuqala imali ku-akhawunti yakho kanye nemali electronic. By the way, mnandi ukuba okuthile okwenziwa ngokuphelele ngaphandle Ikhomishana, ihlukanisa kusukela Yandex Web-mani.
Khona-ke ungathola imali Unistream, ugcwalisa ifomu kusayithi Bilayn.Dengi (imali Ukudluliselwa). Uma ugcwalisa umsebenzisi ukucela ulwazi lomuntu siqu futhi inani uMnyango Unistream, lapho kuhlelwe ukuthola imali yabo. Kwabe sekukhala ucingo uzothola i-SMS inombolo ukudluliswa, okuyinto ke kufanele ngokuthi, iphasipoti yakho, futhi ukhumbule lokho lemali liye ebalulwe isicelo.
Iseva elibamba ayiphenduli. Izimbangela nokuxazulula inkinga
Toast emadodeni evesini bese temibhalo yephrozi netindzaba
Ukwazi kanjani izinga lokushisa kwe-laptop? Kufanele kube yikushisa kwe-laptop?
Umuthi 'Fitoelita Healthy nezinso' ukuze amakati: yokusetshenziswa, ukwakheka kanye nokubuyekeza
Kusho "Lavacolla". Yokusetshenziswa